Semalt एसईओ सामग्री मार्केट कसरी गर्ने जान्छ
तपाईले सबै चरणहरू पार गर्नुभयो, इन्टरनेटले देखेको सब भन्दा राम्रो सामग्री निर्माण गर्नुभयो, तर तपाईले नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। हामीलाई थाहा छ कि तपाई के माध्यमबाट जाँदै हुनुहुन्छ। के तपाईंलाई थाहा छ? Semalt गर्छ? एक मूर्ख प्रश्न सही? तर अनुमान गर्नुहोस्, तपाई सहि हुनुहुन्छ। Semalt नम्बर एक प्लेटफर्म हो जुन तपाईको वेबसाइट, ब्लग पोष्ट, वा लेख गुगलको पहिलो पृष्ठमा र अन्य शीर्ष खोज इञ्जिनहरूका लागि हो। तर Semalt को एक अझै राम्रो सुविधा यो हो कि हामीले तपाईंलाई पहिलो राख्यौं। हामी तपाईको व्यवसायलाई सफल भएको हेर्न चाहन्छौं, र यो प्राथमिकतामा नम्बर एक हो। तर यो गर्नका लागि हामीले तपाईंको SEO मार्केट गर्न आवश्यक छ।
जेसुकै ठूलो कुरा भए पनि, यो उचित मार्केटिंग बिना तपाईको शेल्फमा रहिरहनेछ। मार्केटिंग व्यापार दुनिया मा सबै चीज हो; यसैले विज्ञापन उद्योगले प्रति वर्ष लाखौं बनाउँछ। ठीक छ, इन्टरनेट पनि उस्तै तरिकाले काम गर्दछ। तपाईंको सेवाहरू वा उत्पादनहरू बजार गर्न, तपाईंसँग सामग्री हुनु आवश्यक छ। तर सम्भावित ग्राहकहरूको स्क्रीनमा यस सामग्री प्राप्त गर्न, तपाईंलाई Semalt र यसको सामग्री मार्केटिंग सेवाहरू आवश्यक छ।
यो खराब विचार होईन यदि तपाईं आफ्नो सामग्री तपाईंको आफ्नै बजार गर्न चाहनुहुन्छ भने, तर के तपाईंसँग यसले तपाईंको सामग्रीलाई पहिलो पृष्ठमा राख्नको लागि लिन्छ? जहाँसम्म, यदि तपाईं वास्तविकतामा इन्टरनेट कत्तिको ठूलो हो भनेर विचार गर्नुभयो भने यो उत्तम हुनेछ। त्यहाँ प्रत्येक व्यवसाय संग, त्यहाँ गल्तीहरूको लागि धेरै ठाउँ छैन, र तपाईंसँग यो सही गर्न संसारमा सबै समय छैन। यो तपाईंलाई यथाशीघ्र चाँडो यसलाई सहि बनाउन मद्दत गर्न अनुभवी पेशेवरहरूको आवश्यकता छ।
Semalt निश्चित सामग्री तपाइँको सामग्री पक्का छ मा छ !!!
जे भए पनि, तपाइँको वेबसाइट निर्माण गर्ने र विकास गर्ने तपाइँको सबै प्रयास तपाइँका दर्शकहरूलाई हेर्नको लागि गुणस्तर सामग्री प्रदान गर्नु हो। यदि तिनीहरूले फेला पारेन वा तपाईंको वेबसाइटमा पुग्न सकेन भने, तपाईंको सबै प्रयासहरू व्यर्थ हुने थियो। दोस्रो पृष्ठ पर्याप्त राम्रो छैन; हामी कसरी सुरु गर्न सकिन्छ भनेर जान्न तपाईं पहिलोमा हुनु आवश्यक छ।
सामग्री मार्केटि institu संस्थानले टर्मको राम्रो परिभाषा दियो। यो परिभाषा विश्वभर मा प्रयोग गरीएको छ, र यसले तपाईको सामग्रीलाई सफलतापूर्वक कसरी मार्केट गर्ने भन्ने बारे मूल बिन्दुहरू बनाउँछ।
सामग्री मार्केटिंग भनेको दर्शकहरूलाई बहुमूल्य, सान्दर्भिक, र समान सामग्री सिर्जना गर्न र वितरण गर्नको लागि मात्र एक मार्केटिंग टेकनीक हो। यो सामग्री स्पष्ट र परिभाषित दर्शकहरु लाई आकर्षित गर्न र प्राप्त गर्न को लागी हो। यो लाभदायक ग्राहक कार्य ड्राइव गर्न को लागी आउँछ।
यसले हाम्रो दिमागलाई असंख्य तरीकाहरूमा खोल्दछ जुन हाम्रो परिभाषालाई मिल्ने तरीकामा विकसित गर्दछ। तपाईंको सामग्री मार्केटिंगमा, Semalt धेरै लेख्ने काम गर्दैछ। यो किनभने हामीले जैविक क्लिकहरू, क्लिकहरू उत्पादन गर्न आवश्यक छ जुन तपाईंको वेबसाइटलाई क्रमबद्ध गर्ने उत्तम सम्भावनाहरू खडा गर्दछ। हामी तपाईंको सामग्रीहरू तपाईंको पाठकहरूको फाइदा हुने तरीकाले सिर्जना गरेर यो गर्छौं। यो शैक्षिक, जानकारीपूर्ण, वा मनोरन्जनकारी हुन सक्छ; जे भए पनि, हामी ग्यारेन्टी दिन्छौं कि तपाइँको आगन्तुक उनीहरूले देखेका कुराबाट खुशी हुनेछन्।
यस विन्दुमा, तपाईं कहाँ यी सबै माथि रहेको छ भनेर पत्ता लगाउन चिन्तित हुनुपर्दछ। ठीक छ, त्यहाँ तपाइँको सामग्री बजार गर्न को लागी एक सीधा उत्तर छ, र यो SEO हो।
यदि तपाईंलाई पहिलो पृष्ठमा तपाईंको वेबसाइट प्राप्त गर्ने बारे केहि थाहा छ भने, तपाईंलाई त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन्। दुबै तरिकाहरू सामग्री बजारका लागि उत्कृष्ट छन्।
पहिलो तरीका अजैविक वा भुक्तानी प्लेसमेन्ट हो। यस प्रकारको एसईओ मार्केटिंगमा, वेबसाइट मालिकले खोज इञ्जिनहरूलाई SERP मा एक ठाउँ खरीद गर्न भुक्तान गर्दछ। जबकि यस विधिले तपाईंलाई तत्काल परिणामहरू दिन बाध्य गर्दछ, यसको परिणामहरू तपाईंले महसुस गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै एक परिणाम यो छ कि एक पटक तपाईं यो सेवा को लागी भुक्तान रोक्नुभयो, त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी छैन कि तपाईं अझै पनी यातायात हुनेछ वा पहिलो पृष्ठ मा हुन योग्य।
तपाइँको सामग्री बजार गर्न को लागी दोस्रो तरीका एक जैविक प्रक्रिया को माध्यम बाट हो। जैविक द्वारा, हामी SEO लाई जनाइरहेका छौं। यस चरणमा तपाई एसईओको साथ परिचित हुनुहुन्छ; यदि होईन भने, तपाईलाई किन गर्नुहुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र समात्नुहोस्। SEO र सामग्री पोडमा दुई मटरको रूपमा मान्न सकिन्छ। तिनीहरूको अर्थ दुई भिन्न चीज हो, तर तिनीहरू पूर्ण रूपमा फिट हुन्छन्। SEO बिना सामग्री छाला, अनुहार, र आँखाहरू बिना शरीर जस्तो छ। यो अवस्थित हुन सक्छ, तर यो त्यस्तो कोही होइन जुन कोहीले हेर्न चाहन्छ।
सामग्री मार्केटमा SEO प्रयोग गर्दै
कुञ्जी शव्दहरू प्रयोग गर्नु तपाईंको सामग्रीलाई ध्यानमा राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण तरिका हो। कुञ्जी शब्दहरू तपाइँको वेबसाइट खोज्न कम्पास हुन्। उनीहरू बिना, पाठकहरू वा आगन्तुकहरूले तपाइँको साइटमा उनीहरूको बाटो कहिले फेला पार्न सक्दैनन्। कम्तिमा पाँच वेबसाईटहरू छन् जुन तपाईंले प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भनि प्रस्ताव गरेको ईन्टरनेट एक विशाल स्थान हो। यसले दर्शकहरू प्राप्त गर्न धेरै प्रतिस्पर्धी र गाह्रो बनाउँदछ। यस विशाल ईकोसिस्टमले खोजी ईन्जिनहरूका लागि वेबसाइटहरू फेला पार्न असम्भव बनाउँदछ।
लाखौं कागजात र क्रमबद्ध अर्डर नभएको कोठाको कल्पना गर्नुहोस्। यो तपाईं वा कुनै पनि प्रणालीको लागि रिकर्ड ब्रेकिंग गतिमा तिनीहरूलाई चाहिने चीजहरू पत्ता लगाउन असम्भव हुनेछ। कुञ्जीशब्दहरू यति महत्त्वपूर्ण छन् कि गुगल जस्ता खोज ईन्जिनहरूले अझै इन्टरनेटमा केही वेबसाइटहरू फेला पार्न सकेका छैनन् किनकि तिनीहरूले यी कुञ्जी शब्दहरू ठीकसँग प्रयोग गर्दैनन्।
कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोगले तपाइँको वेबसाइटलाई अगाडि राख्दछ। जब प्रयोगकर्ताहरूले उत्तम पिज्जा स्पट जस्ता शब्दहरूको लागि खोजी गर्दछ, तब सबै परिणामहरू देखापर्दछन् किनकि तिनीहरूसँग यी सामग्रीहरू हुन्, पृष्ठ नामबाट शीर्षक र उप-शीर्षकहरूमा, तपाईले बेस्ट + पिज्जा + स्पट भेट्टाउनुहुनेछ।
खोज इञ्जिनहरूले कारणहरूको एक समूहको लागि कुञ्जी शब्दहरूको मान गर्दछ
उनीहरूको काम सजिलो बनाउँदछ: के तपाईंले याद गर्नुभयो कि गुगलले तपाईंको खोजी परिणामहरू फेला पार्न उनीहरूले कति समय लिएको छ भनेर प्रदर्शित गर्दछ? इन्टरनेट चलाउँदा गति एक महत्त्वपूर्ण कुरा हो। खोज ईन्जिनहरू २०- seconds० सेकेन्ड खर्च गर्न चाहँदैनन् उनीहरूले उपयुक्त खोज फेला पार्न अघि; यसैले उनीहरूलाई प्रयोगकर्ताहरूको लागि परिणामहरू छिटो प्रदर्शन गर्नका लागि किवर्डहरू आवश्यक पर्दछ।
शुद्धता: बिना कुञ्जी शब्दहरू, खोज इञ्जिनसँग वेबसाइटको उद्देश्य वा कार्य परिभाषित गर्ने कुनै तरिका हुँदैन। Semalt वेबसाइटमा तपाईले एसईओ, सेवाहरू, र कीवर्डहरू जस्ता शब्दहरूको निरन्तर प्रयोग पाउनुहुनेछ। यी शब्दहरूले खोजी ईन्जिनहरूलाई बुझ्न मद्दत गर्दछ कि Semalt एक अग्रणी र एक शीर्ष-वर्ग एसईओ अनुकूलन कम्पनी हो। कुञ्जीशब्दहरू प्रयोग गरेर, खोजी ईन्जिनहरूले सहि वा नजिकबाट सम्बन्धित परिणामहरू प्रदर्शन गर्दछ। तिनीहरू बिना, खोज इन्जिनहरूले परिणाम प्रदर्शन गर्न अनुमानहरूमा भर पर्नु पर्ने थियो, जुन राम्रोसँग काम गर्दैन।
लिंकहरू तपाईंको एसईओ मार्केट गर्ने अर्को तरीका हो। ईनबाउन्ड, ब्याकलिks्कहरू, वा बाह्य लिंकहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् जब तपाईं आफ्नो सामग्रीलाई सबैभन्दा धेरै हेराईहरू प्राप्त गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यी HTML लि्कहरू अन्य वेबसाइटहरूबाट भिन्नता हुन् जुन तपाईंको वेबसाइटमा दर्शकहरूलाई ल्याउँदछन्। अन्य महत्त्वपूर्ण र राम्रा सम्मानित वेबसाईटहरूबाट लिंकहरू धेरै ट्राफिक प्राप्त गर्न सक्दछन्। कल्पना गर्नुहोस् प्रसिद्ध साइटहरू जस्तै अमेजन वा फोर्ब्स, तपाईंको साइटमा लिंक प्रयोग गरेर। यसको मतलब उनीहरू तपाइँको वेबसाइटको विज्ञापन गरिरहेका छन्। प्रयोगकर्ताहरूले यी साइटहरू मार्फत पढ्दा तिनीहरू यी लिंकहरूमा क्लिक गरेर अन्तमा स्वचालित रूपमा तपाईंको वेबसाइटमा पुनःनिर्देशित हुन सक्छन्। यो उत्तम हो किनभने उनीहरूका दर्शकहरू तपाईका दर्शक हुन्छन्। दसौं वा सयौं अन्य वेबसाइटहरूमा त्यस्तै चीजहरू भएको कल्पना गर्नुहोस्। यसले स्वचालित रूपमा तपाईंको वेबसाइटलाई धेरै दर्शकहरू प्राप्त गर्दछ।
वेबसाइट नविकरण गर्दै
तपाईं आफ्नो साइटमा दर्शकहरू वा आगन्तुकहरू प्राप्त गर्न को तनाव को माध्यम ले जान चाहनुहुन्न केवल गरीब सामग्रीको कारण तिनीहरूलाई छोड्नुहोस्। Semalt ले लेखिएको वा निर्माण गरिएको सामग्री हटाउन सामग्री अडिट गर्नेछ। सामग्रीहरू त्यसपछि पेशेवर लिखित र डिजाइन गरिएको सामग्रीले प्रतिस्थापन गर्दछ जुन तपाइँको पाठकहरूलाई रहन्छ र नियमित हुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्दछ। Semalt ले नक्कल सामग्री हटाएर तपाईंको सामग्रीलाई पनि सुधार गर्दछ। ठूला वेबसाइटहरूमा कहिलेकाँही नक्कली सामग्री हुन सक्छ। यसले तपाईंको साइटहरूलाई अव्यावसायिक देखिएको बनाउँदछ, जसले तपाईंको व्यवसायको गलत छविलाई छोड्छ। Semalt डुप्लिकेट सामग्री हटाउन अतिरिक्त माइल जान्छ र ताजा र रिच सामग्रीको साथ प्रतिस्थापन गर्दछ।
वेबसाइट नविकरण गर्न पनि पुरानो वा अप्रचलित सामग्री हटाउनु समावेश छ। एक पटक कुनै विशेष सुविधा वा सेवा मिति सकिए पछि, Semalt ले यस सामग्रीलाई वेबसाइटबाट हटाउँछ। ई-वाणिज्य अनलाइन शपिंग व्यवसायका लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाइँ चाहानु हुन्न कि ग्राहकहरू केहि उत्पादनहरूको लागि अर्डर राख्नका लागि तिनीहरू अब उपलब्ध छैनन्।
सामग्री मार्केटि ofका फाइदाहरू
यसले तपाईंलाई तपाईंको दर्शकहरूसँगको बलियो सम्बन्ध विकास गर्न मद्दत गर्दछ। इन्टरनेट एक धेरै प्रतिस्पर्धी स्थान हो र नियमित प्राप्त तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ को रूप मा सजिलो छैन। तपाइँका दर्शकहरूलाई राख्ने एउटा तरिका उनीहरूसँग बलियो सम्बन्ध बनाएर हो।
यो तपाइँको ब्रान्ड जागरूकता र मान्यता सुधार गर्दछ। एउटा सानो व्यवसायको रूपमा, तपाइँ तपाइँको लक्षित दर्शकहरु लाई तपाइँको ब्रान्ड प्राप्त गर्न को चुनौती सामना गर्नेछ। सामग्री मार्केटिंगको साथ, तपाईंको सामग्री सजिलैसँग तपाईंको दर्शकहरूको अनुहारमा राखिनेछ। यसले तपाइँको सामग्री हेर्न र तपाइँको ब्रान्डको विकासको लागि अनुमति दिन्छ।
सामग्री मार्केटिंग तपाइँको उद्योग मा पेशेवरहरु को रूप मा तपाइँको व्यापार स्थिति। तपाईंको व्यावासायको विकास गर्न र इन्टरनेटमा राख्नुमा तपाईंको विशेषज्ञता प्रदर्शन पछि, तपाईंले विश्वलाई हेर्नु पर्छ। सामग्री मार्केटिंगले व्यक्तिलाई जवाफ र समाधानको लागि पहिले तपाईंको सामग्रीमा फर्कन यो सम्भव बनाउँदछ।
अन्तमा, तपाईले प्राय: व्यवसायले चाहेको फाइदा लिन पाउनुहुनेछ। सामग्री मार्केटिंगले तपाईंको साइटमा ट्राफिक उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ जुन अपरिहार्य रूपमा लिड्समा रूपान्तरण हुनेछ। इनबाउन्ड लिंक उत्पन्न गर्नु भनेको सामग्री मार्केटिंगको प्राथमिक उद्देश्य हो। यसले तपाईंको व्यवसायको लागि अधिक अवसरहरू उत्पन्न गर्दछ।